HOYA MULTIFLORA: DARYEELKA GURIGA, UBAX, SAWIR - SOOSAARKA DALAGGA
Ubax cajiib leh "Hoya Multiflora"
Hoya multiflora waa ubax qolal ah oo u baahan wax badan oo taxaddar iyo daryeel weyn. Waxay si fiican uga jawaabtaa dharka ugu sarreeya waxayna leedahay ubax dheer. Faafin by jarida.
Multiflora Hoya waxaa iska leh dhirta iswada leh. Ubaxa waxaa lagu baddalay qarnigii 18aad by botanist Robert Brown. Beedka qurxinta waxaa lagu magacaabay beerta beerta Thomas Hoy.
Goobta cagaaran ayaa kori karta labadaba guriga iyo duurka. Qoryaha quruxda badani waxay jecel yihiin roobabka roobka ee Australia, Indonesia, iyo Hindustan.
Waxay leedahay qaab shisheeye. Kobaca dhalintu waa qumman yahay caleemaha khafiifka ah. Midabka caleenta caleenta, dhererka, waxay gaareen in ka badan 10 sentimitir, oo ballaaran oo ku dhow 6 centimitir. Gooynta laga bilaabo 1 ilaa 1.5 sentimitir.
Cadaadintu waa mid kala duwan, oo ka muuqda caleemo ballaaran oo qaangaar ah. Soo bixitaanka caleemaha on brown afkoda, in ka badan 1 sentimitir. Soo bixitaanka dalladaha on peduncles ka badan 5 sentimitir. Dhaqdhaqaaqa yar-yar, miro-kulul, roodhid. Hayso 16-22 ubax kasta dallad kasta. Xayawaanka ubaxa ah, oo gaduud ah, gadaal ah, hoon-cad-cad. Dusha gudaha baraf-caddaan leh dhibco casaan yar. Nidaamka xididku wuu yar yahay.
Kala bedelida baadiyaha ornamental
Multiflora yaryar ayaa la googooyaa sida nidaamka xididku korayo. Qaadida duurka qaangaarka ah waxaa la sameeyaa mar 3-4 sano kasta. Sannad kasta taangiga waxaad u baahan tahay inaad bedesho daaha sare ee dhulka. Ka dib iibsashada, geedaha qurxinta waxaa lagu beeray weel leh lakab khafiif ah oo dheecaan leh. Lebbis jaban, dhagaxyo, dhoobo dhaadheer. Dheriga waa inuu ahaadaa mid fayow oo leh meel bannaan oo loogu talagalay nidaamka xididka geedka.
Si aad u hesho warshad qurux badan leh Waxay isku dayaan in ay duurka ku beeriiyaan dhawr kalluun.
Ka dib markaad degtoMuddo laba toddobaad ah, si wanaagsan loo aaso dhirta, multiflora waa in lagu hayaa hooska qayb ahaan. Xilliga qoraxda, dhirta ayaa doorbidaysa dariishada dhinaca galbeed ama dhinaca bari. Haddaad sanduuqii xagga koonfureed ku soo dhigtaan, ka dibna dhirta waxay heli doontaa sunburn gubasho daran, oo caleemo cagaar ahna waa daalan yihiin. Xilliga jiilaalka, waqtiga ubaxku waa inuu noqdaa mid si gooni ah loo qaato. Wixii nadiif ah ee nalalka cirbadaha, nalka florescent, LED, sodyam cadaadis sarreeya.
Carro loogu talagalay transplanting multiflora qaangaarka ah waxay ku haboontahay wax kasta oo dabacsan oo leh huuri hawo sare.
Isticmaali karo ciidda, dhulka madow, dhulka loamy. Wareegida dhalinyarada Hoya, peat, vermiculite, iyo ciidda la iibsaday ayaa isku dhafan si siman.
Hoyga daryeelka badan ee Hoya ee guriga
Laga soo bilaabo guga hore ilaa dayrta dambe Kobcin xoog leh. Sidaa darteed, Hoye multiflora waa lagama maarmaan si loo hubiyo in si firfircoon oo sax ah loo waraabiyo. Waxaa lagama maarmaan ah in maalin walba biyo meydho, ka dib markii la qalajiyo dhulka. Warshad si taxadar leh u waraabisay, 2-3 koob oo waqti ah.
Xilliga dayrta, biyaha ayaa yaraaday. ilaa 3-4 maalmood oo kasta. Multiflora ma jecla biyaha taagan, sidaas darteed waxay u baahan tahay nidaam dheeri ah oo dheecaan leh. Biyaha waraabinta waa in ay ahaato mid kulul iyada oo aan lahayn kiimikada. Weel yar, dhulku si dhaqso ah ayuu u engegaa, tani waxay keeni kartaa dhibco badan oo caleemo ah.
Tan iyo markii Hoya laga soo qaado roobabka, Waxay jeceshahay qoyaan hawada sare oo deggan. Beelaha ornamental waxay u baahan tahay maalin walba ku buufin biyo diirran. Nidaamka buufinta waa in la sameeyaa laba goor - subaxdii iyo habeenkii habeenkii. Xerooyinka ornamental ma jecla inay ku dhowaadaan bateriga iyo qalabka kuleylka. Waqtiga hurdada ee warshadda waxay la timaadaa dayr gaaban.
Muddadan, waxaa lagama maarmaan ah in lagu yareeyo heerkulka illaa 15 ° C waxayna yareyneysaa biyaha.
Haddii nidaamkan aan la raacin, ubaxyada Hoya waxay noqon doontaa mid caajis ah, oo aan dhidid lahayn, oo gaaban.
Beeraha ubaxa waxay jecelyihiin heerkulka qolka 20 ilaa 25 ° C. Hoya multiflora uma dulqaadan karto dhibco fara badan iyo isbeddellada heerkulka. Laguma talin in la geeyo balakoonka, lagu koriyo ama beerta inta lagu jiro xilliga xagaaga. Sababtoo ah heerkulka aan xasilloonayn ee ubaxa waxay u muuqan kartaa dhibco madow, caleemaha ayaa dhici doona.
Iyadoo muddo dheer ku sii jira xaalado aan raaxo lahayn ee baadiyaha, geedka ayaa dhiman kara. Dharka ugu sarreeya waxaa laga sameeyaa bartamaha guga dhamaadka xagaaga. Nidaamka waxaa la sameeyaa hal mar 3-4 maalmood. Bacriminta macdanta ah ee la iibsaday - yaryar, cusbo, nitrogen, fosfate, potash - waxay u fiican yihiin. Xayawaanka ayaa si fiican uga jawaabaya ubax badan oo ah Bacriminta nafaqada iyo bacarimiso. Soo saaridooda waxaa lagu sameeyaa goynta. Goobaha ayaa dooranaya oo leh labo labo caleen. Gooynta noocan oo kale ah waxay u koraan si wanaagsan oo xididada si fiican. Kaga koritaanka guriga ayaa yeelan kara jirida oo leh hal is-dhaafsi, laakiin noloshooda iyo ubaxu waxay noqon doonaan kuwo gaabis ah. Nidaamkan, waa inaad doorataa caleemaha sannadkii hore. Caleemaha ubaxa waxay kaloo bixiyaan xididada, laakiin sida baadiyaha ah ma kori doono iyo Bloom. Iska yaree asliga ah waa in la dhigaa biyaha heerkulka qolka. Ka dib markaa, waxaa lagu riixaa substrate xidid iyo qoyan. Wixii fiicnaan wanaagsan oo abuuraya jawi aqalka dhirta lagu koriyo, beeritaanka waxaa lagu daboolaa dhalo ama dhalo.
Multiflora waxay kori doontaa oo kaliya marka meel buuxda oo laga buuxiyo weelka.
Blooming iyo manjooyin ubax
Multiflora waxaa loo turjumay sida baadiyaha ubaxa qani ah. Cagaarka ubaxa ah, sanadkiiba. Waxay dhacdaa guga iyo xagaaga. Waqti dheer wuxuu soconayaa in ka badan hal iyo badh hal toddobaad. Ubaxyo cusub ayaa laga yaabaa inay ku muuqdaan pedunki hore.
Burburka yar yar ayaa ubaxsan 9-12 bilood ka dib markaad degto dhulka. Wareegtadu waa caraf, jilicsan, ubax. Si loo helo hoy baadiyaha, dusha sare ee garabka ugu muhiimsan waa in si taxadar leh loo gooyaa. Tallaabadu waxay dhacaysaa kadib xaashida afaraad.
Gooyooyinka taajka waxaa lagu qabtaa xilliga dayrta ee sanadkiiba ka dib markii ubax buuxa. Iyadoo warshad samaysan oo xasilan ay noqotaa midab iyo qurux. Tirada peduncooyinka ayaa si weyn u kordhaya. Waa muhiim inaad ogaato taas inta lagu guda jiro dhismaha taajku ma taaban karo caleemaha gaaban. On afkoda sida loo dhigi karaa tiro badan oo caws ubax. Koritaanka ubaxa waa mid gaabis ah. 15 sano jir ah.
Ubaxa wuxuu ku dhici karaa cayayaanka: aphids, caarada caarada, xajmiga, akoonnada, muluqa. Marka cayayaanka la helo, caleemaheeda waxaa lagu dhaqaa saabuun iyo biyo tuubo. Markaas waa lagama maarmaan in la xalliyo xal gaar ah. Si arrintan loo sameeyo, sunta cayayaanka ku habboon, labadaba waxay iibsadeen oo laga sameeyay guriga. Saabbuunta isku dhafan ee lagu qasi kariyo dib udajir caleen. Waxaad sidoo kale codsan kartaa xal kiniin ahlagu qasi jiray biyo qiyaas ahaan laba qaado oo shaaha 10 litir oo biyo ah.
Hoya multiflora waxay u baahan tahay daryeel badan, quudin habboon, iftiin dheeraad ah, waraabin joogta ah iyo buufin maalinle ah.
Ubaxa ma koraan qaybta koonfureed, uma dulqaadanayo qorraxda adag. Wuxuu si fiican uga jawaabaa bacriminta. Bloomsiyada sanad walba, waxay leedahay ubax qurux badan iyo dhirta liin.
Marka xigta waxaad arki kartaa sawirka of Khoi Multiflora:
Hoos waxaa ku qoran liis ay ku qoran yihiin waxyaabo laga yaabo inaad daneyneyso: